Vhidhiyo: Colts.com inoita Vhidhiyo Kushambadzira kweVatsigiri Nzira Yakakodzera!
Chipiri, Mbudzi 13, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Pat akatumira vhidhiyo nhasi yemhuri yekwaColt yemasaiti iyo yandaifunga kuti yaishamisa - kuendesa kusvikwa kweColt.com, myIndianaFootball.com uye MyColts.net. Ivo vakanyatso gadzira yakanaka vhidhiyo inoridza iyo inowedzera yakanaka ficha ... yakadzokororwa kushambadzira. Nguva imwe neimwe munhu paanoisa izvi mune yavo saiti, mushambadzi wavo anosvika kune vateereri vatsva. Zvakanyatsoitwa. Pat anobvunzawo mubvunzo wakakosha… nevashanyi vanosvika mamirioni 7.5 kuColts.com pagore, asi 280,000